Miala ao amin'ny Twitter ny Genshin Impact leakers, mihidy ny Honey Impact. | la-manette.com
Miala ao amin'ny Twitter ny Genshin Impact leakers, mihidy ny Honey Impact.
11 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
MiHoYo dia toa manao dingana matotra hamerana ny fivoahana, ary misy zavatra mahaliana nitranga teo amin'ny fiaraha-monina.
Navoaka tao amin'ny 2020, Fomba Genshin dia nanao anarana ho azy tao anatin'ny fotoana fohy. Nitombo be ny lalao tao anatin'ny volana maromaro ary tsy hita soritra hihena atsy ho atsy.
BEBE KOKOA : Genshin Impact: Ahoana no hilalao amin'ny controller amin'ny fitaovana finday
Ny fanavaozana dia nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fahombiazan'ny lalao, miaraka amin'ireo mpamorona mamoaka fanavaozana ho an'ny lalao isaky ny enina herinandro. Ireo fanavaozana ireo dia mitondra sora-baventy vaovao, endri-tsoratra vaovao, fikatsahana vaovao, faritra vaovao, sy ny maro hafa. Noho izany, miandry fatratra ny famoahana ny fanavaozana ny mpilalao.
Raha efa nanaraka ny Genshin Impact ianao na oviana na oviana, dia mety ho fantatrao ny fomba nanehoan'ireo mpitrandraka data sy mpitsikilo zavatra alohan'ny hamoahana ny fanavaozana. Mpilalao maro no miandry fatratra ireo fivoahana ireo, satria afaka manampy azy ireo hanapa-kevitra izy ireo na hitifitra ny sora-baventy ankehitriny na hiandry.
Vao haingana, nitatitra izahay fa nitory ny tranokalan'ny vidéo sinoa Bilibili ny miHoYo mba hanaraha-maso olona 11 izay namoaka vaovao. Nampiakatra ny raharaha teny amin’ny fitsarana ny orinasa, ka voatery nanome vaovao momba ireo tompon’antoka tamin’ny fivoahana ireo i Bilibili ary mety hanenjika azy ireo ny miHoYo.
Amin'izao fotoana izao, maro amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra sy ny fitrandrahana data no nilaza fa tsy hamoaka vaovao intsony. Na dia nanakana tanteraka ny kaontiny aza ny mpitsoka malaza sasany, toa an'i abc64, ny hafa kosa nandao ny lalao niaraka tamin'ny fanomezana fanaovam-beloma ho an'ireo mpankafy azy. Ny iray amin'ireo fanomezana ireo dia nahitana fanambarana lehibe avy amin'ny Sukuna, manambara fampahalalana manan-danja momba ny lalao.
Eny ary @Genshin_Impact mitady hampidina antsika any aoriana.https://t.co/Y2iqlc7Zeq
Esoriko ao anatin'ny 24 ora ny tranokala. Araho hatrany raha mila fanazavana fanampiny.
- Tantely (@TantelyDodogama) Septambra 10, 2021
Raha mbola teo am-panaovana izany rehetra izany ireo mpankafy, dia nanambara i Honey, iray amin'ireo mpitrandraka data manan-danja indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina ary mpamorona ny Honey Impact fa nanakatona ny tranokala izy noho ny fikasan'i miHoYo hampidina ilay tranokala.
Vakio ihany koa: Genshin Impact: Ahoana ny fahazoana Primogems
Midika angamba izany fa tsy hahita mitsoka vetivety isika. Ho hita eo na hiova ny toe-draharaha amin’ny ho avy, saingy manjavozavo ny zava-misy ankehitriny.
MiHoYo dia mandefa filazana ara-dalàna momba ny fandravana ny Honey Impact, angona wiki lehibe indrindra an'ny Genshin Impact.
Ireo mpankafy Genshin Impact angamba dia mahafantatra ny angon-drakitra Honey Impact ho toy ny tranokala feno fampahalalana mahasoa, ao anatin'izany ny tahan'ny fahasimbana, ny fitaovana fiakarana, sy ny maro hafa. Vao haingana no nahazo fampitandremana avy amin'ny ekipan'ny lalànan'ny miHoYo izay toa mikendry ny hanakatona ilay tranokala ireo mpampiantrano ny tranokala.
Ny Honey Impact dia nampiantrano fampahalalana an-taonany maro momba ny dikan-teny ho avy amin'ny lalao, ahafahan'ny mpankafy mahita ny votoaty ho avy. Nampiasain'ny mpahay teoria sy ny mpilalao be dia be ny tranokala, ary toa voarahon'ny miHoYo mihitsy izy izao.
Ny angon-drakitra malaza amin'ny Honey Impact Genshin Impact dia mety ho rava
Ny angon-drakitra malaza an'i Genshin Impact, Honey Impact, dia nisotro ronono androany noho ny fanerena avy amin'ny ekipan'ny lalàna miHoYo mba hahazoana ny DMCA an'ny tranokala. Ity karazana hetsika ara-dalàna ity dia ampiasain'ny orinasa lehibe toa an'i Nintendo hanesorana ireo fitaovana heveriny ho fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ny mety ho antony hiezahan'i miHoYo hanakatona ny Honey Impact dia satria heverina ho loharanon'ny fivoahana sy fampahalalana hafa ilay tranokala.
Rehefa nesorina ny Honey Impact, miala ireo mpiboaka, ary tsy miseho amin'ny zavatra ofisialy mihitsy i Lumine, dia nesoriko fotsiny ny genshin. Midira ao amin'ny genshin aho, manao ny androko, ary miala avy eo. Ny leaks dia manome ahy zavatra tsy andriko.
- Pochi (@prospectivehobo) Septambra 10, 2021
Na izany aza, ny Honey Impact dia mihoatra noho ny tranonkala iray mampiantrano ny fivoahana. Loharanom-pitaovana sarobidy ho an'ny karazana mpilalao Genshin Impact rehetra ny tahiry, manomboka amin'ny mpamorona votoaty sy teorista ka hatramin'ireo izay liana tsotra izao amin'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny hetsika iray taloha.
Vakio ihany koa: Ny daty famoahana ny Jujutsu Kaisen vanim-potoana 2 dia azo ambara amin'ny Septambra 2021.
Loharanom-baovao manan-danja ho an'ny tantara sy ny antsipirian'ny tantara hafa ihany koa ny Honey Impact, miaraka amin'ny feo ho an'ny mpilalao tsirairay azo henoina. Ny Honey Impact dia iray amin'ireo tranonkala tsara indrindra hamaliana ny fanontaniana rehetra momba ny Genshin Impact, ary ny fanakatonana ny tranokala dia hamela mpankafy maro tsy ho voavaly.
Mpilalao maro ihany koa no mampiasa ny Honey Impact ho tondrozotra ho an'ny atiny Genshin Impact amin'ny ho avy, satria ny fivoahana dia manome fahatakarana ny votoaty ho avy. Loharanom-baovao sarobidy ho an'ny vondrom-piarahamonina ny pikantsary sy horonan-tsary omen'ny tranokala, ary tsy misy tranonkala manana fampahalalana betsaka toy ny Honey Impact amin'izao fotoana izao.
Ny fomba nitantanany toe-javatra mitovy amin'izany i miHoYo:
Toa vao haingana no nanomboka nifantoka tamin'ny famongorana ireo fivoahana tao amin'ny vondrom-piarahamonina Genshin Impact ny miHoYo tamin'ny alalan'ny fandraisana fepetra ara-dalàna amin'ny olona maro.
Efa nitory an'i Bilibili i Mihoyo tamin'ity herinandro ity, iray amin'ireo loharano lehibe indrindra amin'ny fivoahan'ny Genshin Impact any Shina. Ny tonian-dahatsoratry ny Genshin Impact dia nangataka ny mombamomba ireo mpitsoa-ponenana 11 lehibe indrindra ao amin'ny Bilibili mba hanesorana ireo loharanon'ny fivoahana sy datamine. Hanomboka ny 17 septambra 2021 ny fitsarana ny fitsarana.
Ahoana ny fihetsiky ny fiarahamonina manoloana ny zava-misy:
Mpilalao maro ao amin'ny vondrom-piarahamonina no efa nijoro ho an'ny Honey Impact ary mivory hanohitra ny fikasan'ny miHoYo hampidina ilay tranokala. Nahasarika mpanaraka ny tranokala, miaraka amina vondrom-piarahamonina goavana amin'ny Discord sy sehatra hafa.
Ry zalahy, ratsy izany. Vao nanomboka ny fomba fanesorana ny HoneyHunter i Mihoyo. Ny tantely no angona votoaty Genshin lehibe indrindra amin'izao fotoana izao ary ahitana ny zava-drehetra manomboka amin'ny votoatin'ny tantara ka hatramin'ny andalana feo amin'ny fiteny rehetra.
#GenshinImpact #HoneyHunterhttps: //t.co/OQjdJMqt6m- ashikai (@Ashikai) 10 septambra 2021
Na dia fantatry ny mpilalao sasany aza ny faniriana hamerana ny fivoahana, dia maro no tsy manaiky ny hevitra hanakatona ny tranokala iray manontolo.
Vakio ihany koa: Kaody fihenam-bidy Garena Free Fire anio 11 Novambra: manavotra ny valisoa Free Fire farany.
Ny Honey Impact dia manana fomban-drazana lava amin'ny maha-tranonkala mahasoa ho an'ny mpilalao, satria tranonkala rahavavin'ny HoneyHunterWorld, tranonkala iray tena manan-danja ao amin'ny vondrom-piarahamonina Monster Hunter. Nanome angon-drakitra tena tsara momba ny fampahalalam-baovao nandritra ny taona maro ny tantely, ary mpankafy maro no tezitra fa nesorina tsy nisy fampitandremana ilay tranokala.
Nandray fepetra henjana tamin'ny fivoahana ny Genshin Impact developer miHoYo tato ho ato, ary maro ireo mpitsoa-ponenana no miala amin'ny lalao. Ho hita eo izay ho famalian'i miHoYo amin'ity fihetsiketsehan'ny mpankafy ity, saingy azo inoana fa mbola hiaro ny Honey Impact ny mpankafy mandra-pahatongan'ny voavaha io olana io. Raha tena voafafa mandrakizay ny tranokala dia ho very ny antsipiriany maro momba ny Genshin Impact.
Kaody fihenam-bidy Garena Free Fire anio 10 Novambra: manavotra ny valisoa Free Fire farany.
Daty famoahana Genshin Impact - rahoviana no ho hita ao amin'ny Nintendo Switch?